Al-Shabaab oo qarka u saaran in ay la wareegto gacan ku heynta mid kamid ah Degmooyinka Gobolka Banaadir « AYAAMO TV
Al-Shabaab oo qarka u saaran in ay la wareegto gacan ku heynta mid kamid ah Degmooyinka Gobolka Banaadir
737 Views Date February 19th, 2014 time 10:37 am
Maamulka Degmada Hiliwaa ee Gobolka Banaadir ayaa shaaca ka qaaday in Dagaalyahanada Xarakada Al-Shabaab ku dhaw yihiin in ay la wareegaan Degmada Hiliwaa .
Cumar Jacfaan Gudoomiyaha Degmada Hiliwaa ayaa shegay in Degmadaasi ay soo buux dhaafiyeen Dagaalyahanada AL-Shabaab , waxa uuna xusay in Maamulkiisa aysan heesan ciidamo ku filan amaanka degmadaasi kana hortagi kara Shabaabka soo galay.
Gudoomiyaha ayaa ugu baaqay Hay’adaha amaanka in ay maamulkiisa gacan ka siiyaan la dagaalanka Al-Shabaab lana geeyo degmadaasi ciidamo isugu jira Booliiska iyo nabad sugid si ay amaanka gacanta ugu qabtaan.
Degmada Hiliwaa ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka dhacayay diall qorsheesan , qaraxyo iyo Weeraro ay inta badan geesanayaan Al-Shabaab , waxa ayna degmadaasi kamid tahay Degmooyinka ay inta badan ka dhacaan falalka amaanka lidiga ku ah.
Degmooyinka Hiliwaa iyo Yaqshiid ayaa la tilmaamaa in ay yihiin labada degmo ay ku badan yihiin Dagaalyahanada Al-Shabaab , waxaana Degmooyinkaasi xiliyada habeenkii ka dhaca Weeraro toos ah oo lagu qaado saldhigyada Ciidanka Dowlada.